I-Primobolan - i-steroid yokusika kakhulu Yenza i powder eluhlaza
I-Primobolan - i-steroid yokusika kakhulu
/Blog/Primobolan/I-Primobolan - i-steroid yokusika kakhulu
ezaposwa ngomhla 12 / 22 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Primobolan. Ibe 2 Comments.
Primobolan (primo), igama leekhemikhali igama leMethenolone, lide liyakuthi liyilwe andbolic androgenic steroid (AAS) yokusika imijikelezo. I-steroid kuphela eyaziwayo kwizijikelezo zokusika trenbolone. Kukho ezininzi ze-primobolan kunye dianabol, anavar imijikelezo, egcina ukuthembeka kwe-primo njenge-steroid yonke.
I-Primobolan ithathwa njenge-steroid engenamandla. Izibalo ze-anabolic / androgenic ziphantsi kwaye enye ye-steroids ebuthathaka kwiphepha; Nangona kunjalo, unamandla kunokuba masteron. Ekubeni i-masteron ihlala ihambelana nemijikelezo yokusika, kwi-primo yephepha kufuneka ifumaneke ukuthembeka ukusika i-steroid.
Ngaba ndiyijobe i-primobolan okanye ndiyifake ngomlomo?
Okwangoku, kukho iintlobo ezimbini ze-primo kwimarike. Iyokuqala, kwaye ininzi ethandwayo, inguqulelo, yindlela ejoyiweyo. Iza kwisisombululo esisekhompyutheni seoli kwiimulules okanye izibilini ezininzi. Ingqungquthela yesibini yi-acetate, eyinxalenye ye-1-methylated version. Bobabini izi-esters zinenzuzo kunye neengxaki.
Indlela yokusebenzisa iMethenolone? Nawaphi amanani?
Ingxaki nge-primobolan yintengo kunye nexabiso lentengo. Kufuneka usebenzise izilingo eziphezulu ukufumana iziphumo ezilungileyo.
Kubantu, amayeza ajoyiweyo kufuneka abe yi-600-800mgs ngeveki okanye ngaphezulu, kunye nemilinganiselo yomlomo kufuneka ibe malunga ne-75-100mgs ngosuku.
Kubafazi, ndincoma ukusebenzisa kuphela umlomo we-primobolan. Kwi-10mgs ngemini ibonakala iyinani elihle ukuqala ngalo. Ufanele udlale kunye neeritha kodwa ungaphumi kwi-20mgs ngosuku.
Iyiphi isiganeko sokuphila se-primobolan?
Ngenxa yenguqulo ye-injection, i-Primobolan Enanthate, isiqingatha-ubomi bujikeleze iintsuku ze-10. Ingqungquthela yomlomo inobungqina obuphikisanayo malunga nesiqingatha sobomi. Kukho iiphando ezithile ezifunayo i-Primobolan Acetate ine-half-life-half-lifetime ye-4, ngelixa abanye bathi iiyure ze-6. Ngoko ke, ukuba ukhusele, i-oral primo ine-4 kwi-6 yeeyure zobomi
Imiphumo emibi ye-Primobolan:
I-Primobolan ithatha imiphumo emihle, kodwa ubunzima bayo bangela ukuba ibe yenye ye-anabolic steroids engumhlobo. Le steroid ayiyi kuthwala imiphumo emininzi ehambelana ne-anabolic steroids ezininzi. Kulawo athathayo, siya kufumana ukuba bahlala benobumnene kwaye kulula ukulawula nokusetyenziswa ngokufanelekileyo. Ukuze siqonde imiphumo emibi ye-Primobolan, siye sawaphula phantsi kwiindidi ezahlukileyo kunye nayo yonke into ofuna ukuyifumana.
Imiphumo emibi ye-Primobolan ayibandakanyi yinto yesantigenic. I-hormone ye-Methenolone ayifuni i-aromatize kwaye ayithathi yendalo ye-progestin. Oku kwenza iziphumo ezinjenge-gynecomastia kunye nokugcinwa kwamanzi okungenakwenzeka kule steroid. Imiphumo emibi ye-Primobolan nayo ayiyi kubandakanywa nayiphi na imiba enxulumene noxinzelelo lwegazi. Uxinzelelo oluphezulu lwegazi luxhaphake ngokuqhelekileyo nokugcinwa kwamanzi amaninzi, okungekho kwakhona kwi-Primo. Akukho mfuneko yeyeza-anti-estrogen ngenxa ye-Primobolan. Nangona kunjalo, enye ingasadingeka ukuba i-estrogenic steroids ifakwe kwi-stack.
Nangona i-steroid emnene, imiphumo emibi ye-Primobolan inokubandakanya iimpendulo ezinamandla, ezibi kunye ne-androgenic. Iimpembelelo zeAndrogenic ziquka i-acne, ukulahleka kweenwele ngokukhawuleza kwizinto ezibhekiselele kwindoda yesimo somzimba kunye nokukhula kweenwele zomzimba. Abambalwa kakhulu kufuneka babe neengxaki nge-acne ngaphandle kokuba banobuhlungu kakhulu kwi-acne ukuqala. Nangona kunjalo, ukulahleka kweenwele ibali elihlukile. Ukuba awunakunqunyanyiswa kwindoda yesimo somntu akukho mngcipheko weentlungu ezilahlekileyo. Ukuba ulungelelaniswa, u-Primo uyaziwa ngokukhawulezisa inkqubo eninzi kumadoda amaninzi. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-5-alpha i-inhibitors njenge-Finasteride esoloko isetyenziselwa ukulwa nemiphumo emibi ye-androgenic ayiyi kuba nefuthe apha. I-5-alpha reductase inhibitors isetyenziselwa ukuvimbela ukuguqulwa kwe testosterone ukuya kwi-DHT, ekhutshwe yi-testosterone ukunciphisa kwi-DHT ngokusebenzisana ne-5-alpha reductase enzyme. I-Primobolan ayinakulinganiswa ne-5-alpha reductase enzyme, akukho ncitshiseko yokuvimba, sele isele i-DHT ebangela i-inhibitors enxulumene nokuba nefuthe elincinci.
Nangona ithwala uhlobo oluthile, ubunjani be-androgenic ye-Primobolan buqinile ngokwaneleyo ukukhuthaza iimpawu zokuhlengahlengiswa kwabasetyhini. Imiphumo enjalo ingabandakanya ukukhula kweenwele zomzimba, ukunyaniseka kweengoma zezwi kunye nokwandiswa kwamagumbi. Nangona kunokwenzeka, loo miphumo ixhomekeke kakhulu kumntu ngamnye. Uninzi lwabasetyhini kufuneka lukwazi ukukhusela i-virilization xa longeza ngokufanelekileyo. Oku kuya kuthetha ukugcina umthamo opheleleyo kunye nobude bokusetyenziswa kwibala elifanelekileyo. Nceda ubone kwicandelo lolawulo lwe-Primobolan. Kungakhathaliseki ukuba yintoni umthamo, ukuba iimpawu zokuqala zenzekile ukhuthazwa kakhulu ukuba unqande ukusebenzisa. Ukuba ukusetyenziswa kuphelile ekuqalekeni kweempawu, baya kuphelela ngokukhawuleza. Ukuba izibonakaliso zibonakala, zinyanzeliswa kwaye zisebenzise ziyaqhubeka ziyakwazi ukuba zingenakwenzeka.
I-Primobolan kufuneka ibe nefuthe elincinci kwixinzelelo legazi kubantu abadala abanempilo ngaphandle kokuba kukho umcimbi ophantsi. Nangona uphezulu lwegazi olungenakwenzeka, luya kuhlala luyinto efanelekileyo yokugcina iso.
Imiphumo emibi ye-Primobolan inokubandakanya imiba ye-cholesterol, ingakumbi i-HDL yokunciphisa i-cholesterol okanye ukunciphisa. Ingabandakanya ukunyuka kwe-LDL cholesterol. I-Primo ithintela kwi-cholesterol iya kuba namandla kune testosterone. Kuya kuba namandla kuneNandrolone neTrenbolone hormone. Nangona kunjalo, kufuneka kube ngaphantsi kwee-steroids ezininzi zomlomo. Amanqanaba e-cholesterol enempilo angagcinwa kunye nale steroid, kodwa kubalulekile ukuba unike umgudu omncinci. Qinisekisa ukuba ukutya kwakho yi-cholesterol enobubele, ephezulu kwi-omega e-fatty acids kwaye ephantsi kwamafutha apheleleyo kunye noshukela elula. Ukuqinisekisa ukuba usebenze ngobuninzi bemisebenzi ye-cardiovascular in practice yakho kubalulekile. Njengoko uninzi luya kusebenzisa i-Primobolan ngexesha lomjikelezo wokusika oko akufanele kube nzima kakhulu ukwenza.
Zonke i-anabolic steroids zinyusa i-testosterone yemveliso. Nangona kunjalo, izinga lokunciphisa ngokuphindaphindiweyo liyahluka kakhulu kwi-steroid enye ukuya kwelinye. Nangona iyakunqanda ukuveliswa kwe-testosterone yemvelo, izinga lika-Primobolan lokunciphisa lihle kakhulu kunamanani amaninzi e-anabolic steroids. Kwisicwangciso sonyango, ngokwenene kunokwenzeka ukuba kugcinwe izinga lokunciphisa phantsi kwe-50%. Oku kungabi sezantsi ngokwaneleyo ukugcina ezinye zingangeni kwiimeko eziphantsi naphezu kokunciphisa. Nangona kunjalo, iqondo lokusebenza kwamanani liya kuba elinye ibali. Ukunciphisa ngokugqithisileyo konke kodwa kuqinisekiswa ngamanyathelo anjalo enza ukuba kufakwe i-testosterone ephawulekayo. Amadoda angabandakanyi i-testosterone engaqhelekanga iya kuba yinto ephantsi kwe testosterone. Akukuphela nje oku kuqhuba iimpawu ezininzi ezinokubangela ukukhathazeka, kungenakulungile. Abasetyhini, nangona abafunayo i-testosterone abayi kuba nemfuneko yokuba unyango olungapheliyo xa usebenzisa i-Primobolan.
Xa ukusetyenziswa kwe-Primo kunye nayo yonke i-anabolic steroids iphelile, ukuveliswa kwe-testosterone yemvelo kuya kuqala kwakhona. Uya kufumana le ngenye ye-steroids elula ukuyifumana xa ivela kuveliso lwe-testosterone. Amadoda amaninzi akhuthazwa ukuba aphunyeze isicwangciso soPhulo lweZithuba (PCT) xa kusetyenziswa ukucinywa. Oku kuya kukhawuleza inkqubo yokubuyisela. Kodwa, akuyi kukubuyisela kwisiqhelo ngokwalo. Oku kuya kuthatha ixesha. Nangona kunjalo, isicwangciso se-PCT siya kuqinisekisa ukuba unetrostoneli eyaneleyo yomzimba ngokufanelekileyo xa amazinga akho eqhubeka ephakama ngokwemvelo. Abo bangayisebenzisi isicwangciso se-PCT, ngelixa beyifumana kwakhona kuya kuthatha ixesha elide. Akukho sikhokelo sokuyeka inkqubo ye-PCT ukuba uya kuphelelwa umjikelezo waluphi na ixesha elide elifanelekileyo.
Inqaku elibalulekileyo kwi-testosterone yemvelo. Ukubuyiselwa kwemvelo kungabikho nendawo ephantsi ye testosterone. Kwakhona kwonakalisa umonakalo omkhulu okwenziwe kwi-Hypothalamic-Pituitary-Testicular-Axis (HPTA) ngokusetyenziswa kwezinto ezingalunganga ze-stteroidal.
I-Oral Primobolan ayithathwa njenge-hepatotoxic anabolic steroid. Akukho datha yokuxhasa ukunyuka koxinzelelo lwe-hepatic okanye umonakalo wesibindi. Kwisiqendu sakhe se-Anabolics, uWilliam Llewellyn uthi kukho ingxelo enye yendoda ekhulile eyayinobungozi besibindi, ukungaphumeleli nokufa. Nangona kunjalo, le yimeko echazwe kuphela yile steroid ngaphezu kweminyaka eyi-50. Ngenxa yalesi sizathu i-hepatotoxicity ayikwazi ukupheliswa ngokupheleleyo kodwa ibonakala ingenakwenzeka.
I-2 Impendulo Amazwana
UDkt Patrick Young06 / 14 / 2018 kwi-4: 18
Ukuthuthwa kwempahla kunye nexabiso lemveliso kuye kwathunyelwa kwibhokisi yakho yeposi. Nceda uqaphele ukuba
Massimo06 / 13 / 2018 kwi-9: 39 ntambama
Ixabiso le-primobolan kunye neendleko zokuthumela kwi-Italy?
I-Testosterone i-Sustanon 250 ipowder yokwakha umzimba: iimfihlo ze-18 kufuneka wazi !!!	Ngaba i-Cytomel / T3 Uncedo malunga nokuLahla kwesisindo?